🥇 Mmemme maka ọmụmụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 905
Mmemme maka ọmụmụ
Video nke mmemme maka ihe ọmụmụ
Nye iwu maka mmemme
Kwụsị ịchọ ezigbo mmemme maka ọmụmụ ihe gị! Achọtara ya ebe a na ugbu a, na ibe a. Usoro ihe omume maka ịkọ ajụjụ sitere na USU ga-enyere aka rụọ ọrụ na nzukọ gị, ga-enye gị ohere ileba anya na mmemme na usoro nke ijikwa azụmahịa gị. Ma, n'ezie, ọ ga-enye ohere ọhụụ nke ijikwa njikwa na njikwa gị. Nke mbu, usoro ihe omumu anyi bu ihe ndi mmadu mebere ka ndi mmadu jiri ya mee ihe. Gbaghara anyi maka tautology, mana okwesiri ebe a, nihi na ihe e mesiri ike bu mmadu. Naanị ekele anyị nwere maka ndị tinyere onwe ha n'ịkụziri ndị ọzọ ihe mere ka anyị mepụta mmemme pụrụ iche, nke naanị ya bụ ịkwado ịrụsi ọrụ ike gị kwa ụbọchị. Mana okwesiri ikwu na ebumnuche a magburu onwe ya nwere otutu onyinye oma na oru di ebube nke di nkpa ugbu a. N'ime ọnwa mbụ, ọ ga-eju gị anya etu usoro ihe omume a siri dị irè na otu o si eme ka njikwa azụmahịa gị dị mma. Na ole mkpali ọ na-enye gị, dị ka njikwa, na ndị ọrụ n'otu oge! Iji nyochaa otu o si zuo ezuo, anyị na-akwado ịgbada n'okpuru peeji a ma pịa njikọ na-arụ ọrụ na ụdị ngosi nke usoro ihe omume maka ọmụmụ ihe. Ọ na-egosipụta atụmatụ ndị bụ isi n'ụzọ zuru ezu, ọnụahịa ajụjụ a abụghịkwa ihe ọ bụla. Ntinye nke ụdị ngosi nke usoro njikwa na-akwụ ụgwọ kpamkpam. Ọ bụrụ na ị gafere arụmọrụ ahụ nwa oge, anyị ga-achọ ịsị na ndị ọrụ ahụ na-ekesa ọrụ n'etiti ndị ọrụ. Dika ikwenye, onye ochichi bu onye njikwa ma obu onye osote ya ma obu ikekwe, onye ndeputa ego ma obu onye ozo atukwasiri obi nke uzo ya gosiputara na mmemme anyi.
Ndị ọrụ na-abanye na sistemụ ahụ na-ele ihe osise zuru ezu na mbụ, mana ọkwa nke ịnweta ha na-egosipụta onwe ha. Dịka ọmụmaatụ, onye njikwa ahụ enweghị oke maka ajụjụ gbara ajụjụ n'ime mmemme ahụ maka ndị nkuzi: ọ nwere ike ịlele akụkọ mmalite ahụ maka ndị ọrụ, rụọ ọrụ, akụkọ nchịkọta, nyocha na ọnụ ọgụgụ, mana enweghị ajụjụ ndị a dị maka onye ọrụ nkịtị. . Usoro njikwa na sọftụwia na-edekọ sọftụwia na - ewepụta usoro elektrọnik ma hụ na iji ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ gị nwere ezi uche. Ọzọkwa, akwụkwọ ndị na-abịa akwụkwọ ga-ahụ ọnọdụ ya na mmemme ahụ. Nọgide na-enwe ọkwa na-abụkarị ihe mkpali dị ukwuu nye ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ mepere, ọ na-agba ha ume kwa ụbọchị. Ozugbo ị banyere usoro nchịkwa nke jiri ha tụnyere akụkụ dị iche iche ma gosipụta nsonaazụ na ọnụọgụ ọnụọgụ, ọ nweghị onye nkuzi na-anọgide na-enweghị mmasị, ma n'ezie na-agba mbọ ịsọ mpi, na-arịgo elu n'ọkwa ndị isi. Ma ọ bụrụ na a na-akwụghachi ndị isi ụgwọ ọrụ site na ego ego, usoro ihe omume ya na akara ndị nkuzi ya dị oke ọnụ ga-egbu nnụnụ abụọ na otu nkume: ọ ga-agba ndị ọrụ ume ume ka ha nwee ihe ịga nke ọma ma jiri aka ha họrọ onye ọrụ kacha mma ma nye ya ezigbo ego kwesịrị. Ee ee, ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa bụkwa ebumnuche nke mmemme maka ọmụmụ ihe. Ọ dị mma ịnwe onye ọrụ dị otú ahụ nọọrọ onwe ya, onye na-ekere òkè ọdụm nke ndị otu niile? Mgbe ahụ ị chọrọ ngwa ngwa ịwụnye ihe omume a bara uru na ngwaọrụ gị!
Ọhụrụ version nke usoro ihe omume-enye gị ohere conveniently hazie ngosipụta nke ozi na tebụl. Ka anyị tụlee ihe atụ nke nchekwa data nke ndị ahịa. E nwere ụfọdụ ederede ederede ote. O nwere ozi dị mkpa nke onye ọrụ ga-ahụ, mana ọ sara mbara. Na mbụ, a ghaghị ịgbatị ubi ahụ n'ụzọ ụfọdụ, nke na-adịghị mma. Na mbipute ọhụrụ, ị nwere ike ijikwa ntinye nke ubi na tebụl ọ bụghị naanị na ụgbọ elu ahụ, kamakwa na nke kwụ ọtọ! Ihe ị ga - eme bụ ijide kọntaktị òké cursor ahụ ma dọrọ ya gaa ebe kwesịrị ekwesị ma ọ bụ naanị ịbawanye elu n'ọhịa ọ bụla. Ugbu a, ị nwere ike ịhazi okpokoro ọ bụla iji kwado mkpa gị. Enwere ike itinye nkụnye eji isi mee n'ọtụtụ ahịrị, na elu nke ubi ahụ n'onwe ya nwere ike gbanwee iji mesie ihe ndị dị mkpa ike. Mgbakwunye ngwanrọ agbakwunye na-arụ ọrụ ọhụụ ma na-eme ka ọrụ gị na mmemme ahụ bụrụ ihe na-adaba adaba ma na-arụpụta. Nchịkọta na tebụl site na ụfọdụ oke ugbu a na-enye gị ohere ịgbakọ nha. Ugbu a ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ zuru ezu, kamakwa ịkwụ ụgwọ oge niile na ụgwọ. Usoro ihe omume nke ọmụmụ na-agbakọ ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ nke ndekọ, kamakwa ọnụ ọgụgụ nke otu. Nwere ike ịhụ ọnụọgụ nke njirisi pụrụ iche na ntanetị ọ bụla. Tụlee okwu ahụ mgbe ịkwesịrị ịjuju n'ọhịa ụfọdụ, mana ọ dị obere. Na mbụ, ha na-elekarị gị anya, n'ihi na mgbe ị na-edezi, mmemme ahụ gosipụtara ha kpamkpam, nke gbasasịrị uche. Ugbu a ị nwere ike ịgụnye mpaghara nhọrọ ndị a n'otu otu ma zoo ha naanị otu ịpị. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ndekọ maka edezi ndekọ ndị ahịa. Ka e were ya na ị chọghị ịhụ ozi kọntaktị ma ọ bụ ngalaba ndị ọzọ oge ọ bụla - naanị pịa akara otu a ga-ezo ya! Window ahụ pere mpe karịa na-enweghị arụ ọrụ. Enwere ike ime otu ihe na windo ọchụchọ data. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịga na weebụsaịtị anyị. N'ebe a, ịchọta ozi niile dị mkpa. E wezụga nke ahụ, ị nwere ohere pụrụ iche ibudata nsụgharị ngosi ngosi nke usoro ihe omume maka usoro ọmụmụ ga-egosi gị uru niile ọ nwere ike iweta na njikwa azụmaahịa gị.
Ọmụmụ na ọmụmụ
aza ajụjụ maka ndị nkuzi
Ajụjụ maka klaasị otu
aza ajụjụ maka ụlọ akwụkwọ ọta akara
Akaụntụ maka ọmụmụ asụsụ
Za ajụjụ maka agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara
Akaụntụ maka ọmụmụ ihe
Ajụjụ maka oge onye nkuzi
aza ajụjụ maka mahadum
aza ajụjụ na agụmakwụkwọ
aza ajụjụ n'ụlọ akwụkwọ
aza ajụjụ maka etiti ụmụaka
Ndenye ego nke umuaka n’ulo akwukwo
aza ajụjụ maka ọmụmụ
mkpesa nke ulo akwukwo
mkpesa nke nkuzi
ajụjụ ụmụ akwụkwọ
Usoro ihe omume nke ndị na-abịa akwụkwọ
aza ajụjụ maka ọzụzụ
Akaụntụ nke etiti ọzụzụ
aza ajụjụ maka ọzụzụ nkuzi
aza ajụjụ mahadum
Nnyocha nke ụmụ akwụkwọ
Mmemme kọmputa maka ọzụzụ
Ihe omume komputa nke nkuzi
Njikwa maka ụlọ akwụkwọ mmụta
na-ahụ maka mmụta
Njikwa ọrụ agụmakwụkwọ
Njikwa nke ụlọ akwụkwọ ọta akara
Njikwa ụlọ akwụkwọ
Usoro nchịkwa nchịkwa agụmakwụkwọ
Usoro ndekọ agụmakwụkwọ
Njikwa usoro agụmakwụkwọ
Usoro nhazi klaasị
Journal maka itinye ego na agụmakwụkwọ
Detuo maka itinye ego na ụlọ akwụkwọ
Detuo maka ndekọ mmụta
Detuo maka nkuzi nkuzi
Nlekọta ụlọ akwụkwọ ọta akara
Nyocha usoro mmụta
Nlekọta ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara
Nlekọta nke Children'smụaka
nhazi nke ngalaba agụmakwụkwọ
nhazi nke nhazi agụmakwụkwọ
ulo akwukwo ulo akwukwo
Mmemme nke usoro agụmakwụkwọ
Usoro mmemme maka ụmụ akwụkwọ
Ihe omume maka ulo akwukwo
Mmemme maka nwata akwụkwọ
Mmemme maka usoro iheomume
Ihe omume maka ulo akwukwo ihe omuma
Mmemme maka ụlọ akwụkwọ ọta akara
atumatu ulo akwukwo
Mmemme maka etiti ụmụaka
Mmemme maka ngalaba ọzụzụ
Mmemme maka inye ọzụzụ nkuzi
ego ụlọ akwụkwọ
Nlekọta ụlọ akwụkwọ
Ihe omume usoro akwukwo
Sọftụwia maka nnabata ego
ụmụ akwụkwọ na-achịkwa
Njikwa mmụta nwata akwụkwọ
Autmụaka iji aka ya
Ihe omumu ihe
Ihe mmemme maka ụlọ akwụkwọ ọta akara
Nlekọta etiti ụlọ ọzụzụ